सोनीका सँगै देखिए उनका बुवा, गाउँमा यसरी बसेका रहेछन्…[ भिडियोसहित]
May 20, 2020 1244
बझागंको माझि’गाउँ युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकायको गाउँ हो । उनी काठमाडौंमा आएर आफ्नो अध्ययन गरिन् अनि आफ्नो ब्यवसायीक जिवन पनि काठमाडौंमै सुरु गरिन् । युट्युवर बन्दा उनी पुजावाट सोनिका बनिन् ।
सोनिकाको नामवाट युट्युवर बनेकी सो’निका निकै वि’वादित थिइन् । उनले निर्माण गरेका भिडि’यो सामग्री दुईअर्थि दिने खालका थिए । त्यसैले पनि उनका ति कार्य’क्रम चर्चीत त हुन्थे तर विवा’दित पनि ।
तर अहिले उनी आफ्नो त्यो रु’पवाट आफुलाई परिमार्जन गरेकी छन् । उनका कार्यक्रमहरु अहिले त्यस्ता हुँदैनन् । उनी वझागंमा जन्मिएर काठमाडौंमा पढेर, हुर्किएर काठमाडौंमै ब्यव’सायमा रमाएकी सोनिका अहिले मुलुकमा लकडा’उनको घोषणा भएसंगै अहिले आफ्नो जनघर पुगेकी छन् । परिवारका सदस्यसंग रमाइरहेकी छन् ।
गाउँका युवाहरुसंग रमाउँदै भिडियो सार्व’जनिक गरेकी छन् । वझागंका रमणीय दृष्य देखाउँदै रमाइलो समय बिताइरहेकी सोनिका’का विषयमा काठमाडौंमा भने विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी भए ।
वर्मा गए पनि कर्म संगै भनेजस्तै सोनिका’लाई पनि त्यस्तै भयो । लकडाउनको सम’यमा अप्ठेरामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्दै जन्घघर पुगेकी सोनिकालाई एउटा न्युज प्रोटलले पूर्वयुव’राज पारसको पैसा चोरेको भन्ने आरोप सहितको समाचार सार्वजनिक गरेपछि उनी फेरी चर्चामा आइन् ।
उनले अहिले त्यो विष’यको खण्डन गरेकी छन् । उनले अहिले आफ्ना परिवारका सदस्य र गाउँघरको परिवेशका बारेमा भि’डियो सार्व’जनिक गरेकी छन् । उनले आफ्नो जन्मठाउँले आफुलाई निकै गर्वको महशुष गराउने बताएकी छन् । उनले आफ्नो आमालाई यसअ’घि नै सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
आज भने उनले आफ्नो वुवा’लाई पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । उनको वुवा वझागंमै खेती किसानी गर्छन । उनले आफ्नो वुवाले व’झागंमा गरेको खेती किसानीको वारेमा पनि बताएकी छन् । प्राकृति’क रुपले अति सुन्दर वझागंमा उनको वुवाले गरेको कृषी पनि पशंसा गर्न योग्य छ ।
आफ्नै हातले नि’र्माण गरेको वाटो, नहर र उत्पादन सार्वजनिक गर्दै उनले आफु’ले पनि वुवालाई ब्यवसायको बारेमा सुझा,व दिने गरेको बताएकी छन् । वुवाले गरेको मौरी पालन, केरा खेती, माछा पालन लगायतका अन्य कृषीमा उनको वुवा’ले गरेको पौरख सार्वजनिक गर्दै उनले नि,कै गर्व महशुष गर्ने बताए,की छन् ।हेर्नुहोस् भिडियो….
Prevआज कुन देशको मुद्राको भाउ कति छ? हेर्नुहोस्
Nextसलमानको परिवारले चोर’लाई पाहुना ठानेर टिभी हेराएपछि…
कमला घिमिरेले गाएको यो गीत एक हप्ता बित्न नपाउदै यति धेरैले हेरे (भिडियोसहित)
बच्चाको टाउकोमा कुकर टाउकोमा फसेपछि डाक्टरले पनि निकाल्न नसक्दा बाध्य भएर यसो गरियो (भिडियो)
बालेन शाहले काठमाडौंको मेयरमा ९० हजार मतले जित्ने दाबी गरेपछि क्याप्टेन विजय लामाले लेखे यति लामो स्टाटस
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (110309)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (78128)